Papaya အမှုန့် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -bubbleteapowderb2b.com
ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည် Papaya အမှုန့် ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, တင်ပို့နှင့်စက်ရုံအတွက် Taiwan။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်သင့်လျော်သောဂုဏ်သတင်းထုတ်လုပ်သူထံမှကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်တစ်နေရာတည်း၌ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရည်အသွေးကိုပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားပြီးအချိန်မီဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်ရောင်းချသူနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် ၀ ယ်သူများအားကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်သောအခါစီးပွားရေးအန္တရာယ်များကိုလျော့နည်းစေသည်။
Papaya Powder မှဆန့်ကျင်သည်-အိုမင်းခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ,Papaya သည်အလွန်သေးငယ်သော micro အမျိုးအစားများစွာရှိသည်-ဗီတာမင်အပါအဝင်အာဟာရ,သတ္တုဓာတ်,အမျိုးမျိုးသော phytochemicals.ဤရွေ့ကားတ္ထုများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ်များအစားထိုးဖြစ်စဉ်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်,DNA ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ,နှင့်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်း.ဤသက်ရောက်မှုအားလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအိုမင်းခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.Papaya မှအရေပြားနှင့်ဆံပင်သည်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်,ဤတစ်ရှူးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်လေကြောင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်,ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်,နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို.
Papaya Powder သည်သဘာဝဓါတ်တိုးဆေးများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်.အဆိုပါ flavonoids,polyphenols,carotenoids,နှင့် Papaya စက်ရုံ၏အခြား phytochemicals ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းသောအခမဲ့အစွန်းရောက်ထိရောက်စွာဖမ်းယူခြင်းနှင့်ကြားနိုင်.အလွန်အကျွံလွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်သောပမာဏသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်.အခမဲ့အစွန်းရောက်များသည်လည်း DNA ပျက်စီးစေနိုင်သည်,ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်.ဤကဲ့သို့သောအရသာရှိသော Papaya Powder သည်ဤဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်!
Papaya အမှုန့်သည်သဘာဝကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်,Papaya အသီးတွင် papain ပါဝင်သည်-လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအိုမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု,Papaya Powder တွင်ကြွယ်ဝသောသင်္ဘောသီးအင်ဇိုင်းပါဝင်သည်,သံပုရာအင်ဇိုင်း,carotene,ပရိုတိန်း,ဗီတာမင်စီ,B နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ်အဖြစ်သတ္တုဓာတ်,ဖော့စဖောရက်,စသည်တို့.,ရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်ရှိသည်,endocrine ထိန်းညှိ,သွေးတိုးရောဂါ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှု,glomerulonephritis,ဝမ်းချုပ်ခြင်း,အစာခြေခြင်းနှင့်အစာအိမ်ရောဂါကုသ,ထိုကဲ့သို့သောအလှအပအဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု,အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု,အရောင်မြှင့်ပါ,လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်-အိုမင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု.
Papaya Powder အူလမ်းကြောင်း၏အကျိုးရှိသောဘက်တီးရီးယားကိုတိုးတက်စေသည်,Enteritis နှင့် laxness ဖျားနာမှုကိုလျော့နည်းစေရန်,အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်.ဒါဟာအစတိုးတက်မှုနှုန်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်,အစာစားချင်စိတ်နှင့်အစာကျွေးစားသုံးမှုကိုတိုးတက်စေရန်,ထိရောက်စွာဇီဝသက်ရှိဖိနှိပ်ရန်,အစားပtheိဇီဝဆေးဝါးလုံးဝ,မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုပwithoutိဇီဝဆေးမရှိဘဲထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်.
Papaya Powder သည်အရသာအမှုန့်စီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.၎င်းသည်အသီးများစွာကြွယ်ဝသောအရသာရှိသည်,ရေပူသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဖြင့်သွားနိုင်ပြီးကောင်းစွာသောက်နိုင်သည်.Papaya နို့ရည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအချိုရည်တစ်ခုဖြစ်သည်,က’သင်္ဘောသီးနဲ့လုပ်ထားတယ်,နို့,သကြားနှင့်ရေခဲ Cube.၎င်းအမှုန့်ကိုနို့ရည်ထည့်။ ရောစပ်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်အဖြစ်သို့ခံရဖို့,နှင့်အတူ’s အထူနှင့်တောက်ပနို့,မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအဖြစ် interweaves.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bubbleteapowderb2b.com/my/papaya-powder.html
သို့: POPPING BOBA CO., LTD.
Papaya အမှုန့် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Papaya အမှုန့် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 23,9889 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bubbleteapowderb2b.com
ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ချောကလက်နို့မှုန့်သည်အလွန်အရသာရှိသောသောက်စရာဖြစ်သည်,က’s အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဆွဲဆောင်နှင့်နို့ရည်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသောပွဲဖြစ်သည်.ချောကလက်နို့မှုန့်သည်ချောကလက်အမှုန့်နှင့်ရောနှောခြင်းကိုမဖြစ်စေသည်-သင့်လျော်သောအဘို့ကိုအတွက် creamer,ထို့အပြင် Malt အရသာကဆက်ပြောသည်.ချောကလက်နို့မှုန့်ကိုလည်းဖျော်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်.Oreo ကွတ်ကီးအချို့ (သို့) crispy eggrolls၊,ကလေးတွေအတွက်အလွန်အိပ်မက်မက်ဖွယ်အချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်. Chocolate Bubble Tea သည်လန်းဆန်းစေသည့်ချောကလက်အချိုရည်ဖြစ်ပြီးရေခဲဖြင့်အကောင်းဆုံးရောနှောသို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သည်.ချောကလက်နို့မှုန့် vanilla ရေခဲမုန့်နှင့်အတူရောနှောသောအခါ,ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ချောကလက်လှုပ်စေသည်.ချောကလက်နို့မှုန့်သည်အခြားပေးသွင်းသူများအတွက်ကျန်းမာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်’အမှုန့်သောက်ရောနှောခြင်း,သကြားအများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏.သံနှင့်ထုပ်ထားသောအရသာရှိသောချောကလက်နို့ကိုခံစားပါ,ကယ်လစီယမ်,ပရိုတိန်း,ပိုတက်စီယမ်,ဆိုဒီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်.အမှုန့်ချောကလက်နို့အရသာရှိတဲ့သောက်စရာဖြစ်ပါတယ်.